Izinhlobonhlobo zamanzi ashisayo, ezethulwa kuma-pharmacy, zikwenza uzibuze ukuthi yikuphi umkhiqizo ozokhetha. Ukuze wenze ukukhetha okulungile futhi ungazisoli ngokuthenga okusheshayo, ake senze ukuqhathaniswa kwamanzi ashisayo okwethulwa emgqeni wabakhiqizi abane abakhulu: Vichy, Uriage, Avene, la Roche-Posay.
Amanzi ashisayo Vichy
Amanzi ashisayo uVichy unesimiso esingakaze sichazwe esibhedlela. Amanzi aqukethe amaminerali angaphezu kuka-15 angajwayelekile, afaka i-Iron (Fe), i-Potassium (K), iCalcium (Ca), iManganese (Mn), i-Silicon (Si).
Amanzi ashisayo omkhiqizo uVichy ubhekene nokuhlenga, ukubuyisela izindawo. Inomphumela omuhle esikhumbeni, isusa ukucasuka futhi yandisa izindawo zayo zokuvikela zemvelo.
Umgwaqo wamanzi u-Avène
Ibonakala ngokuqukethwe okuphansi kwamaminerali, iqukethe i-Calcium (Ca), i-Magnesium (Mg), i-Silicon (Si). Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kwamanzi ngenani elikhulu lama-bicarbonates, izakhi zokulandelela, iziqu ze-oligoelements.
Amanzi ashisayo avela ku-brand ye-Avène yakhelwe abantu abanezinhlobo zesikhumba esibucayi. Ngenxa yezindawo zayo, isusa ukucasuka ngenxa yezici zangaphandle nezangaphakathi.
Ukunisela okushisa ukushisa Uriage
Iqukethe inqwaba yamaminsa amaminerali. Amanzi ashisayo okuthiwa i-Uriage yi-isotonic, anomphumela omuhle ku-epidermis yesikhumba.
Ngenxa yomphumela wokumisa kancane, amanzi e-Uriage afaneleke ngokuphelele isikhumba se-oily / inkinga.
I-Spa yaseRa Roche-Posay
Inokuqukethwe okuphezulu kwe-selenium (Se). Ukuba i-antioxidant enamandla, i-selenium isiza isikhumba ukulwa nokuguga ngaphambi kwesikhathi. Amanzi ashisayo aseLa Roche-Posay asusa ngokushesha ukucasuka, aqeda imiphumela yokubamba, futhi uphulukisa ukuvuvukala kwesikhumba. Amanzi ashisayo aseLa Roche-Posay aklanyelwe isikhumba esibucayi kakhulu.
Naphezu kokungaboni ngaso linye, amanzi ashisayo abakhiqizi abahlukene aba yilawo mthombo wokupholisa nokucwenga, esingawutholi kakhulu kusukela ngosuku olushisayo lwehlobo.
Kodwa-ke, izindlela zokusebenzisa amanzi ashisayo zikhulu kakhulu, ngakho awukwazi ukuhlanganyela nesilwane sakho unyaka wonke:
Ivuseleleke phakathi nosuku
Uma ufuna ukuvuselela ubuso bakho ngesikhathi sishisa ehlobo, inhlanhla encane yamanzi ashisayo ingaba usizo. Vele ufeze amanzi ashisayo futhi ujabulele amaminithi wokupholisa. Ukuvama kwesicelo ebusweni kuncike kuphela kusifiso sakho.
Imithombo yamanzi ashisayo isisiza "ukuxazulula" i-powder kanye ne-tonal basis. Ngesikhathi esifanayo, ngenxa ye-spray encane, ayilimazi ukwakheka kwamehlo. Emva kokuqedela kuqediwe, fafaza amanzi, ukugcina okungaba ngu-15 cm ebusweni. Kulesi simo, ukwakheka ngemuva kokusebenzisa amanzi ashisayo isikhathi eside ngeke kudinge ukulungiswa.
Ihambisa imisipha yobumba
Amanzi ashisayo aphikisana nomsebenzi wokugcoba ubumba, angawavumeli ukuba aphele, ngaleyo ndlela avimbele ukuqina okuqinile kesikhumba kanye ne-eutravimirovanie. Hlanganisa njalo amanzi okushisa ebusweni bakho, ungavumeli ubumba lobumba lume ngokuphelele.
Ulungisa isikhumba ukuze uthole ukunakekelwa okwengeziwe
Amanzi ashisayo afanele ukusebenzisa ngaphansi kokunakekelwa okuyinhloko (ukhilimu, i-serum). Ngenxa yempahla yayo, igalelo lokungena nokungenwa okungcono.
Ukhulula ukucasula kwesenzo esikhanyayo esikhumbeni
I-watermelon ye-Thermal iduduza isikhumba ngemuva kokuhlanza, ukupenda, ukushisa kwelanga neminye imiphumela esikhumbeni.
Lolu hlu alukude nokugcina, ungathola wena nezinye izindlela zokusebenzisa amanzi ashisayo. Into esemqoka akufanele ukwesabe ukuzama.
Indlela yokwenza usawoti ifakwe
Ukusikhipha isifuba saseJapane njengendlela engcono kakhulu yokuhlinzekwa kweplastiki
Indlela yokulahla izintuthwane emagodini
Kuthiwani uma ngilenga ama-moles?
Ungasusa kanjani izinwele zomzimba ngokweqile, amathiphu
Iphayi eliphakathi kwe-apula amabili
I-Horoscope ka-2015 ye-Cancer
Izitshalo ezingaphakathi kwe-chrysalidocarpus
Isingeniso sokudla kokuqala okuhambisanayo
Cuisine Greek, okukhethekile ukudla, izitsha kazwelonke
Amakhadi amnandi noMaslenitsa ka-2018 ezinsukwini zesonto: ngokuhalalisela, imibhalo kanye nezinkondlo
Ukwaneliseka okugcwele emsebenzini wakho ozithandayo
Izindlela zokwelapha ukujuluka ezinganeni
Umalusi waseBelgium Dog, umlando wokuzalwa
Yini ongayibheka lapho ukhetha umshini wokuwasha
Izakhiwo zokwelapha zezinyosi: zokupheka, uhlelo lokusebenza, incazelo